War deg deg ah: gudoomiye ku-xigeenkii degmada wardhiigleey oo daqiiqado ka hor ladilay. | warsugansomaliya.wordpress.com
Wararka laga helaayo degmada War-dhiigley ee gobalka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiye ku xigeenkii degmadaasi kooxa hubeysan ay waqti yar ka hor toogteen iyaga oo dhaawacay laba kamid ah ilaaladiisa.
Goob joogayaasha ayaa waxa ay ku waramayaan in kooxaha hubeysan ay si gaadma ah ku weerareen ayna ku guuleesteen in ay khaarijiyaan si dhaqas ah kadib markii ay ilaaladiisiina ay dhaawacya gaarsiiyeen.
Magaca gudoomiye ku-xigenka la khaarijiyay ayaa lagu sheegay Axmed, waxaana wararku intaa ku darayaan in uu ahaa oday tan iyo dowladii Maxamed Siyaad Barre soo ahaa gudoomiye ku-xigeen.
Goobta uu dilku ka dhacay waxaa gaaray ciidamda amaanka oo howl galka sameeyey inkasta oo aan la ogeyn in ay soo qabteen kooxihii dilka ka danbeeyay.
Si kastaba waa gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee Muqdisho lagu khaarijiyointa lagu guda jiray bishaan Barakeysan ee Ramadaan , waxaana ka horeeyay haweeney degmada Yakhshiid gudoomiye ku-xigeen ka aheyd oo gurigeeda iridsiisa lagu dilay.
War Deg Deg ah kooxo hubeysan oo caawo Degmada B/weyn ku toogtay madaxii gasoorka degmadaasi
← Wiil Afar sano Jir ah oo Markii Labaad ku Guulaystay in uu noqdo Duq Magaalo (Daawo Sawirkiisa)
Maamulka Cabdi Raxmaan Faroole oo ku dhawaaqay in ay xariirka u jareen dowlada Federalka Soomaaliya( Aqri war-saxaafadeed) →